एकल-कार्य उपकरण | Martech Zone
शनिबार, अगस्ट 29, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 एडम सानो
Douglas Karr उनले लेखेका बेला मेरो दिमागमा ट्याप भएको हुनुपर्छ एकल टास्क कसरी गर्ने। म यो पूरै बहु-टास्किंग चीजको बारेमा धेरै सोचिरहेको छु, कसरी लगातार स्थिरताबाट टिडबिटको लागि आशा राख्नु र एक भन्दा बढी कार्यहरू गर्नु एकै पटकमा यस्तो लाग्दछ कि यसले वास्तवमा मलाई समय खोसेको छ (र मलाई एक किसिमको मूर्खको महसुस गराउँछ)। जब म रिपोर्टहरू, ब्लग पोष्टहरू वा रणनीति कागजातहरू लेख्छु, म मेरो म्याकबुक प्रोको डकको फ्लोटसम र जेट्सम दिन्छु र स्क्रिनले मलाई धेरै टाढो बनाउँदछ।
हिजो मात्र, मेरो साथी प्रमाणित ब्रान्ड रणनीतिकार, ब्रान्ट Kelsey, मलाई दुई उत्पादक उपकरणहरू देखाइयो जुन व्यक्तिलाई एउटा चीजमा लामो अवधिमा फोकस गर्न अनुमति दिनको लागि डिजाइन गरिएको थियो। त्यो कल्पना गर्नुहोस्। उत्पादकता उपकरणहरू जसले एकल कार्यमा दीर्घकालीन ध्यान दिन प्रोत्साहित गर्छन् कहिल्यै लोकप्रिय गो गो गो एजेन्डा पुशको सट्टा। रुचि छ? म्याक प्रयोगकर्ताहरू, यी अनुप्रयोगहरू जाँच गर्नुहोस्:
WritRoom - विकर्षण मुक्त लेखन वातावरण
यो अनुप्रयोगले तपाइँको पूरै स्क्रिनलाई साधारण ईन्टरफेसमा बदल्छ जुन अन्य सबै दृश्यहरू र ब्लक पप अप अनुस्मारकहरू र च्याट विन्डोजहरूमा लुक्छ। यदि तपाइँ घटनाहरूमा तपाइँको टिप्पणीहरू टाइप गर्न चाहानुहुन्छ, WritRoom एक उत्तम तरिका तपाइँलाई तपाइँको ईमेल, ट्विटर खाता, फेसबुक र सबै ती थोरै विचलितहरू मार्फत म्यानिकली क्लिक गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई डेलिभर भइरहेको जानकारीमा केन्द्रित हुनबाट रोक्न सक्छ।
टाढा उत्साहित - निष्क्रिय अनुप्रयोगहरूको स्वत: लुक्ने
उत्साही अवेले यसको नामले के भन्छ। केवल तपाईंको मनपर्ने सेटिंग्स समायोजित गर्नुहोस् र अनुप्रयोगले निष्क्रिय अनुप्रयोग विन्डोहरू लुकाउन पृष्ठभूमिमा काम गर्दछ। मलाई यो लाग्छ कि घरधनीले चुग्रिएको कागजहरू उठाउँदै छ र पुस्तकहरू शेल्फमा राख्दछ जब तपाईं आफ्नो रिपोर्टहरूमा काम गर्नुहुन्छ।
जब तपाईं डगलस लिदै हुनुहुन्छ सल्लाह एकै परियोजनामा ​​फोकस गर्न सोमबार केही घण्टा बाहिर ब्लक गर्न, हुनसक्छ तपाईं यी मध्ये कुनै एक उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अपडेट: WordPress मा अब एक छ पूर्णस्क्रीन मोड यसले तपाईंलाई सबै प्रशासकीय गडबडी बिना नै लेख्न अनुमति दिन्छ!
टैग: पूर्ण स्क्रिनएकल कार्यलेखनलेखन उपकरण
अगस्ट 30, 2009 मा 9: 17 AM
मलाई एकल टास्कि forको लागि उपकरणको आवश्यक पर्दैन, केवल केही अनुशासन। जब तपाईं एकल कार्यमा फोकस गर्न चाहानुहुन्छ बन्द गर्नुहोस् वा यी गडबडी गर्ने अनुप्रयोगहरू अन नगर्नुहोस्। यो सरल छ र यो मेरो लागि काम गर्दछ विशेष गरी जब मैले प्रस्तुतीकरण वा ब्लग पोष्ट वा कागज लेख्नुपर्दछ। र तरीकाले उत्पादकता माथि जान्छ जब तपाईं एकल टास्किंग गर्नुहुन्छ।
तपाईंले चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन कि तपाईंको वातावरणले यसलाई याद गर्दछ यदि यदि तपाईंले समय साझेदारी प्रयोग गर्नुभयो भने, विशिष्ट कार्यका लागि समय स्लटहरू विनियोजन गर्नुभयो र जब यो मात्र गर्नुभयो। पुरानो दिनमा कम्प्युटरहरू प्रोग्राम गरिएको थियो जुन सम्पूर्ण उद्यमहरूमा केवल एक महँगो कम्प्युटर उपलब्ध थियो। प्रयोगकर्ताहरू अझै पनी प्रभाव भएका थिए जुन उनीहरूको लागि मात्र काम गरिरहेको थियो। चाल केवल समय अन्तरालहरू छनौट गर्नको लागि हो ताकि प्रतिक्रिया समय व्यक्तिसँग यो छाप सिर्जना गर्न पर्याप्त छ। जस्तो कि हामीसँग एउटा मात्र मस्तिष्क छ, यो मेरो कार्यहरू तालिकाबद्ध गर्न राम्रो एल्गोरिदम जस्तो देखिन्छ।
अगस्ट,, २०१ 30 2009:२१ अपराह्न
धेरै राम्रो, निला! मलाई थाहा पनि थिएन कि त्यहाँ त्यहाँ बाहिर उपकरणहरू थिए र त्यो मलाई मार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लगलाई सधैं उपलब्ध गराउन मन पर्छ। यस पोष्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!
अगस्ट 31, 2009 मा 2: 14 AM
क्रिश्चियन सही छ कि एकल कार्यको लागि उत्तम उपकरण तपाईको दिमाग हो। सजिलैसँग एउटा गतिविधिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकल्प यो हो कि तपाईंले काम गर्दा गर्न सक्नुहुन्छ।
अगस्ट 31, 2009 मा 7: 42 AM
याप… म ईसाईसंग सहमत छु… .. यो पक्कै पनि तिम्रो मस्तिष्क हो।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 8::2009० अपराह्न
के कसैसँग पीसीको लागि तुलना सुझावहरू छ?
म सिफारिस गर्दछु (जस्तै मैले आफ्नो पोष्टमा लाश र एकल कार्यको कला को बारे मा) DarkRoom को प्रयोग गरेर, WritRoom को विन्डोज संस्करण।
मँ खुशी छु कि मैले यो पोष्ट पाए! 😀 मसँग मेरो एडीएचडीको कारण मुद्दाहरूमा फोकस गर्दैछ र जब म अनलाईन हुँ म सबै स्थानमा छु। केहि अनुप्रयोगहरू भन्दा बढि दर्जन ट्याबहरू खोल्दैनन्। सफ्टवेयर जंकी भएको कारणले मैले समय प्रबन्धन, संगठन र उत्पादकत्वको साथ मद्दत गर्न केहि कार्यक्रमहरू भेट्टाउन मद्दत गरेको छु। म ट्याब, बुकमार्किंग र त्यस्तै फाइदाहरूमा फायरफक्स एडोनहरू पनि लिन्छु।
यहाँ केहि मैले प्रयोग गरेको ...
-TooManyTabs (तपाईं चयनित प row्क्ति, असीमित प r्क्तिहरू चाहनुहुन्छ जति धेरै ट्याबहरू बचत गर्नुहोस्)
-टैब फोकस (कुनै ट्याब र ट्याब खुल्दछ मा पोइन्ट)
-इन्स्टा क्लिक (कुनै पनि यूआरएल क्लिक गर्नुहोस् र यो अर्को ट्याबमा खुल्छ-जीमेलमा काम गर्दछ तर थन्डरबर्ड होइन)
-ReoveTabs (बायाँ ट्याबहरू बन्द गर्दछ, दायाँ)
-AddThis (rt क्लिक गर्नुहोस् र धेरै यूआरएल थप्नुहोस् धेरै सामाजिक साइटहरू - ट्वीट गर्नको लागि उत्तम)
धेरै उपयोगी र जानकारीपूर्ण सामग्री को लागी धन्यवाद। म एक नयाँ ग्राहक र अनुयायी हुँ!